Ku xooji xayaysiinta ganacsigaaga baraha bulshada (Social Media) – Brandkii
Shirkada badan ayaa isticmaala aaladaha Facebook, Twitter iyo Linkedin lakin uma isticmaalaan inay ku xayaysiistan ganacsigooga. Sidan wada ognahey aaladahan ayaa ah goobo ay dadku iskugu imadaan si fududna aad ku gaadhsiin karto dadka ganacsigaga. Hoos ka dheeho dhawr wado oo ku sahlaya inad ganacsigaga ku dhex xayaysiiso baraha bulshada (Social Media).
Dib u habeen ku sameen xarumaha aad ku leedahay baraha bulshada
Guriga aad dageyso waa in aad marka hore hagaajisa oo aad qurxisa si uu u noqdo goob ay dadku ku nafisi karaan sidaaso kale xarumaha aad ku ledahay baraha bulshada qurxi oo ku nashqadee muqaalo indhaha soo jiidanayo iyo waliba fariimo qofka raali galinaya.
2. Isticmaal mar walba calaamada #hashtag
Calaamad hashtag kaliya looma isticmaalo in lagu ogaado dadka arin isku mida ka hadalaya ee isticmaalaya hashtag isku mida ah sido kale waxad u isticmaali karta in aad fal celin kaga hesho dadka kugu taxan.
3. Si joogta ah wax usoo gali
Hadii ay dadku dhawr cisho oo isku xigta soo booqdan xarumahaga wax cusubna ay ka wayaan dib uguma soo noqonayaan barahaaga bulshada, marka ku dadaal sidaad fariimo iyo muqaalo joogta ah usoo gelin laheyd si dadku kugu taxmaan mar walba.
Baraha bulshadu (Social media) waa goob aad ku xayaysiisan karto ganacsigaga si fudud waliba lacag la,aan ah. Hadii aad u bahaantahey in qorshe lagugu sameyo barahaaga bulshada Fadlan la Soo xidhiidh/Xiriir shirkada Brandkii.